Dib u Eegista Caymiska Caafimaadka Cigna: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | sharci ama khiyaamo | Siduu U Shaqeeyo
Bogga ugu weyn Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee Cigna 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Sharci Ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Isha sawirka: cigna.com
Dhacdo lama filaan ah ayaa ku dhici karta qof kasta oo naga mid ah wakhti kasta. Taasi waa sababta uu qof walba ugu dadaalayo inuu helo caymis caafimaad oo ku filan oo dabooli doona kharashaadka caafimaadka marka baahidu timaaddo.
Taasina waxay noqotay wax iska caadi ah, gaar ahaan bulshooyinka horumaray. Laakiin caqabadda maalmahan jirta ayaa ah helitaanka shirkadda caymiska caafimaadka ee saxda ah oo leh daboolid dhammaystiran iyo kharash yar.
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa wax badan oo ku saabsan Caymiska Caafimaadka ee Cigna, sida ay u shaqayso, iyo faa'iidooyinka & khasaaraha shirkadda. Laakiin marka hore, aan kaa nadiifinno su'aasha: waa maxay Cigna Health Insurance?
Macluumaadka Aasaasiga ah ee ku saabsan Caymiska Caafimaadka ee Cigna
Caymiska Cigna waa bixiye caymis caafimaad oo caalami ah oo siiya macaamiisheeda caymis daryeel caafimaad oo gaar ah.
Laga bilaabo 2021, waxay ka shaqeysaa 10 gobol oo Mareykanka ah: Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Missouri, North Carolina, Tennessee, Utah, iyo Virginia.
Caymiska Caafimaadka ee Cigna waa hormuudka caymiska caafimaadka casriga ah. Labadaba Shirkadda Caymiska ee Waqooyiga Ameerika (INA) iyo shirkadda Caymiska Nolosha ee Connecticut waxay isku biireen inay samaystaan ​​Shirkadda Cigna Health and Life Insurance 1926.
Markaa taasi micnaheedu waa Cigna wuxuu ku jiray ganacsiga caymiska ilaa 200 sano ka hor.
Waxaa jira dib -u -eegisyo badan oo Caymiska Caafimaadka Cigna ah oo buuxiya internetka maanta. Shirkadda waxaa ku taliya dad badan waxaana jira sabab wanaagsan oo taas loo helo. Caymiska Caafimaadka ee Cigna wuxuu leeyahay A (Aad u fiican) qiimeynta AM Best. Cigna wuxuu leeyahay A+ qiimeynta BBB (Better Business Bureau).
In kasta oo ay codsadeen aqoonsi oo dib -u -eegis lagu samaynayo, laakiin sumcadda Cigna ayaa ka horraysa. Shaki kuma jiro in shirkad bilawgeedii ahayd 1792, markii ay abuureen dhowr muwaadin oo caan ah Hoolka Madaxbannaanida ee Philadelphia hadda waa shirkad caalami ah oo leh in ka badan 180 milyan oo macaamiil in ka badan 30 dal.
Fiiri bogga rasmiga ah ee Cigna halkan haddii aad rabto.
Akhri: Dib u Eegista Caymiska Nolosha ee Cigna 2021 Iyo Sida ay U Shaqayso
Caymis noocee ah ayay Cigna bixisaa?
Cigna waxay macaamiisheeda ugu adeegtaa meesha caymiska caafimaadka. Waxay siiyaan caymis caafimaad shaqsiyaadka iyo qoysaska leh caymis wanaagsan iyo kharash macquul ah.
Shirkaddu waxay kaloo bixisaa caymiska ilkaha, caymiska indhaha, Medicare & Medicaid (loogu talagalay muwaadiniinta Mareykanka), iyo qorshayaal kale oo dheeri ah.
Dib -u -eegista Cigna Caymiska ayaa laga yaabaa inaanay qeexin dhammaan caymiska caafimaadka & fayoqabka ee shirkaddu bixiso.
Laga yaabaa in aad kala soo xiriir wakiil caymis oo madaxbannaan si uu kuugu baro qorshayaasha shaqsiyeed ee Cigna ama qorshayaasha loo shaqeeyaha.
Akhri: Dib u Eegista Caymiska Erie 2021 | Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad, Sidee U Shaqaysaa
Sidee Cigna Life Insurance u Shaqaysaa?
Caymiska caafimaadka waxaa lagu qeexi karaa heshiis sharci oo u dhexeeya adiga iyo bixiye caymis caafimaad oo kaa caawiya inaad daboosho kharashka adeegyada daryeelka caafimaadka. Habkaas, maahan inaad iska bixiso dhammaan kharashyada caafimaadka.
Caymiska Caafimaadka ee Cigna kama duwana habkan. Kani waa sida Cigna Caymisku u shaqeeyo:
Waxaad bixinaysaa lacag bille ah. Kani waa khidmadda laga jaray koontadaada qorshahaaga caafimaad ee aad dooratay.
Lacagta laga jari karo waa la sameeyaa ilaa qorshahaagu bilaabmayo in la hirgeliyo, si tartiib tartiib ah ayaa lagu siinayaa boqolleyda kharashka badan oo la adeegsan karo.
Markaad bilowdo inaad la wadaagto kharashaadka qorshahaaga, aqoonsigaaga caymiska wuxuu ka tarjumayaa ka -jaristaada iyo caymiskaaga labadaba. Tusaalaha caadiga ah ee caymis -ka -beddelku waa marka qorshaha caafimaad ee qof uu gaaro heer uu bixiyo 70% kharashaadka caafimaadka inta uu ka bixinayo 30% lacagtiisa.
Caymiska Caafimaadka ee Cigna wuxuu bixiyaa ku dhawaad ​​dhammaan noocyada caymiska caafimaadka laga bilaabo qorshayaasha dheeraadka ah ilaa caafimaadka qalliinka iyo ilkaha iyo Medicare.
Shirkadaha caymiska badankoodu waxay daboolaan 100% daryeelka ka -hortagga. Tan waxaa ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin baaritaannada joogtada ah iyo baaritaannada sannadlaha ah, tallaalka carruurta, iyo wixii la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, qorshayaasha qaarkood ayaa laga yaabaa inay weli u baahdaan lacag yar oo la yiraahdo copay.
Caymiska Caafimaadka ee Cigna, sida shirkadaha caymiska intooda badan, wuxuu bixiyaa barnaamijyo iyo adeegyo dheeraad ah oo lacag la'aan ah.
Akhri: Faallooyinka Caymiska Safeco 2021: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Faa'iidooyinka: Maxaad u Dooratay Caymiska Caafimaadka ee Cigna
Caymiska Cigna waa shirkad sumcad sare leh. Iyada oo tobanaan sano u shaqaynaysay bixiyaha caymiska caafimaadka, Cigna waxay ka heshay hay'ado maaliyadeed oo kala duwan qiimeyn sare. Waa mid dhaqaale ahaan tayo leh oo tayada adeeggu waxay ahayd mid heer sare ah. Tusaale ahaan, waxay si toos ah uga heshay qiimeynta A kuwa la midka ah AM Best, Standard & Poor's, Moody's iyo wixii la mid ah.
Shirkaddu waxay leedahay xarun adeeg macmiil oo abaalmarin ku guuleysata taas oo ka soo qeybgasha welwelka isticmaaleyaasha 24/7. Cigna wuxuu leeyahay faham buuxa iyo xiriir uu la leeyahay isticmaaleyaashooda (bukaanka), dhakhaatiirta iyo qoysaska ama kooxaha xubnaha ka ah.
Shirkaddu waxay siisaa marin u helka liiska bixiyeyaasha shabakadda iyo tas -hiilaadka waddanka oo dhan. Waxay kaloo bixiyaan adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah dhammaan xubnaha ka diiwaan gashan. Caymiska Caafimaadka ee Cigna, sida shirkadaha caymiska intooda badan, wuxuu bixiyaa barnaamijyo iyo adeegyo kale oo lacag la'aan ah.
Websaytka myCigna iyo abka moobiilka waa mid aad u saaxiibtinimo leh oo waxtar leh. Waxay u sahlaysaa xubnaha inay dhex galaan faahfaahinta daboolkooda, ka -goynta & caymiska, sheegashooyinka, xusuusinta ballanka, iyo inbadan. Dadka leh siyaasad -dejintu waxay geli karaan onleenka si ay u raadsadaan dhakhaatiirta shabakadda qorshaynta, hubiyaan xaaladda sheegashada, iyo inay helaan kaararka aqoonsiga caymiska.
Xubinku wuxuu ku raaxeystaa faa'iidooyinka sida marin u helka farmasiga gudbinta guriga, khad gargaar oo u go'an si uu u codsado macluumaadka caafimaadka, iyo barnaamijyada abaalmarinta. Eeg mid kale faa'iidooyinka caafimaadka xubnaha qorshuhu way ku raaxaystaan.
Afeef ahaan, dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee Cigna lama kafaalo qaaday ama maaliyad ahaan xiriir la leh shirkadda. Markaa, xog gaar ahi waxay ku salaysan tahay markhaatiyada xubnaha qaata dheefaha dheeraadka ah. Cigna uma soo bandhigto macluumaadka ku saabsan qiima dhimisyadeeda gaarka ah ama barnaamijyada abaalmarinta dadweynaha guud.
Qasaarooyinka/Dib -u -dhaca Caymiska Caafimaadka ee Cigna
Caymiska caafimaadka ee Cigna lagama heli karo dhammaan gobollada Mareykanka. Waxaa jira toban gobol oo Maraykan ah oo Cigna ka hawlgalo. Kuwani waa Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Kansas, Missouri, North Carolina, Tennessee, Utah, iyo Virginia.
Helitaanka caymiska ugu badan waxay ku xiran tahay mushaarkaaga. Siyaasadaha kooxda Cigna tusaale ahaan waxay leeyihiin xadad caymis la heli karo oo aad heli karto. Iyada oo ku xidhan loo -shaqeeyahaaga, waxaad iibsan kartaa Caymiska Cigna oo u dhigma ama shan laab mushaharkaaga. Caadi ahaan, xaddiga ugu badan ee caymiska aad iibsan karto waa qiyaastii $ 500,000.
Dhammaan foomamka caymiska caafimaadka dheeraadka ah ma awoodaan in lagu daro siyaasadda caymiska caafimaadka aasaasiga ah.
Akhri: Dib -u -eegista Caymiska Xididka 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Caymiska Caafimaadka ee Cigna ma Xalaalbaa mise waa Fadeexad?
Guud ahaan waxaa jira cabashooyin badan oo ka imanaya macaamiisha oo ku saabsan sheegashooyinka, diidmada, iyo arrimaha adeegga macaamiisha ee warshadaha caymiska.
Wakiilka Ururka Caymiska Qaranka (NAIC) ayaa soo sheegay in cabashada Cigna ay tahay 0.93. Saamiga cabashada ee shirkadda caymiska ayaa ka caawisa macaamiisha inay isbarbar dhigaan tayada adeegga macmiilka caymisyada marka loo eego saamiga ay ku leeyihiin suuqa niche.
Heerka waa 1.0 iyo sidaas, shirkadaha qaata cabashooyinka yar sida caadiga ah waxay leeyihiin saami ka yar 1.0.
Sanadkii 2020, saamiga cabashada ee Cigna wuxuu ahaa 0.93, waxyar ayuu ka fiicnaa tusmada cabashada qaranka. Xaqiiqadani waa calaamad weyn in Caymiska Caafimaadka ee Cigna uusan ahayn khiyaamo. Qiimeynta Fitch iyo goobo kale oo badan oo dib -u -eegis ayaa ku qiimeeyay shirkadda "A" sida "heer sare".
Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka ee Cigna dhammaan intarneedka ma laha wax aan ahayn ammaanta adeegyada shirkadda. Caymiskani gabi ahaanba waa sharci. Waxaad hubsan kartaa caymis marka qorshahaaga caymisku bilaabmo.
Laga soo bilaabo 2021, Cigna Caafimaadka iyo Caymiska Nolosha waxay lahaayeen in ka badan 17 milyan oo macaamiil maskaxeed iyo ilko oo caalami ah. Waxay gashay No.13 liiska 2020 ee Fortune 500 ee shirkadaha Mareykanka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad raadineyso siyaasad caymis caafimaad iyo mid weyn si aad u ilaaliso qoyskaaga, macaashkaagu wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay waxa mushaharkaagu kafaalo qaadi karo.
Sida laga soo xigtay degelkooda, waa kuwan noocyada caymiska caafimaadka ee Cigna bixiyo:
Caymiska caafimaadka shaqsiga (ROTH-IRA, Medicare,)
Caymiska caafimaadka kooxda (PPO, HMO, Helitaanka Furan, qorshooyinka maxalliga ah ee la habeeyay, qorshayaasha magdhawga dhaqameed, qorshayaasha caafimaadka ee laga jari karo)
Xisaabaadka kaydka iyo kharashaadka (HSA, FSA)
Qorshayaasha ilkaha iyo aragga
Barnaamijyada caafimaadka iyo fayoobaanta
Nolosha, Naafada Kooxda, shilka shilka, iyo caymiska kala goynta
Akhri: Imisa Caymis Nololeed ayaan u Baahanahay? | Tilmaan Buuxo
Sidii hore loo sheegay bilowgii maqaalkan TheWealthCircle, dhacdo lama filaan ah ayaa ku dhici karta qof kasta oo naga mid ah wakhti kasta. Markaa shakhsiyaadka iyo waalidku waa inay hubiyaan inay u soo iibsadaan caymis caafimaad naftooda, carruurtooda, iyo kuwa ay jecel yihiin.
Dib -u -eegista caymiska Caafimaadka Cigna waxay iftiimin dheeraad ah u yeelatay sida loo helo caymis, faa'iidooyinka iyo khasaaraha, iyo noocyada caymiska caafimaadka ee ay bixiyaan.
Su'aalaha la isweydiiyo ee Cigna Health Insurance
Waa imisa qiimaha caymiska Cigna?
Qiimaha saxda ah ee caymisku ma go'an yahay maxaa yeelay waxaa jira dhowr qorshe oo mid walba la heli karo qiimahiisa. Waxaad la xiriiri kartaa miiska taageerada macmiilka oo aad loo tababaray waxaadna weydiin kartaa qorshayaasha caymiska caafimaadka ee Cigna. Caymiska caymiska ee qorshaha aasaasiga ah wuxuu caadi ahaan ku bilaabmaa qiyaastii $ 5,000 iyo $ 19,000 oo loogu talagalay shakhsiyaadka iyo qoysaska siday u kala horreeyaan.
Waa maxay Noocyada Caymiska Caafimaadka ee Cigna Bixiso?
Caymiska Caafimaadka ee Cigna wuxuu bixiyaa qorshooyin caymis shaqsi iyo mid qoys. Waxay bixiyaan shil iyo xaalad degdeg ah, aragga, ilkaha, naafada, baahi gaar ah, iyo barnaamijyo caymis oo dheeri ah. wax badan ka baro adigoo gujinaya halkan.
Waa maxay Faa'iidooyinka Xubintu Cigna Bixiso?
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka aad hesho marka aad iibsanayso qorshaha caymiska caafimaadka ee Cigna waxaa ka mid ah wicitaannada telehealth/telemedicine oo lacag la'aan ah, tallaallada hargabka oo aan kharash lahayn, iyo baaritaanno joogto ah inta badan gobollada Mareykanka.
Sidee loo qiimeeyaa Caymiska Caafimaadka ee Cigna?
Caymiska Caafimaadka ee Cigna waxaa lagu qiimeeyaa hay'ado maaliyadeed oo caan ah, hay'adaha sharciyeynta caafimaadka iyo dawooyinka, iyo shirkado. Guud ahaan shirkadu waxay leedahay saami aad u wanaagsan oo ku baahsan dhinacyo badan.
Muxuu daboolayaa siyaasadda Caymiska Caafimaadka ee Cigna?
100% daboolida daryeelka ka -hortagga iyo caafimaadka dadweynaha. Waxyaabaha sida tallaalka, baaritaannada qaarkood, miisaanka oo yaraada, iyo xakamaynta sonkorowga. Ka sokow waxyaabahan dheeraadka ah ee bilaashka ah, siyaasadaha caymiska Caafimaadka ee Cigna waxay daboolaan shilalka iyo xaaladaha degdegga ah, qalliinnada, ilkaha, aragga, caymiska kooxda loo shaqeeyaha, iyo kuwa kale.
Dib -u -eegista Caymiska Xididka: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
Faallooyinka Caymiska Safeco: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Dib u eegista Caymiska Liinta: Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka | Legit & Fadeexad | Sida ay u shaqayso
Haysashada daboolida caymiska alaabtayada ama hantidayadu ma aha mid duug ah, maadaama dad badani weli tagaan…
Waa maxay Caymiska Kaydka Bulaacadaha, iyo Shirkadaha ugu Fiican 2022
Qadadka bullaacadaha ayaa ah qaybo aad u jilicsan oo guriga ka mid ah maadaama hal nasasho ama daadad ay si dhab ah u diri karaan…
Nolosha Globe in kasta oo ay qiimihiisu yar yahay oo aanay jirin siyaasad baadhis caafimaad oo weli maamusha in ay soo gudbiso cabashooyin badan…